Zvinotarisirwa Zvinotarisirwa Zvinounza Kugutsikana Kwevatengi Martech Zone
Zvinotarisirwa Zvakatendeseka Zvinounza Kugutsikana Kwevatengi
China, August 28, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Kwemakore mashoma apfuura ini ndakashanda munzvimbo dzakakwira-kushushikana kwekutanga tekinoroji nharaunda. Nyaya mbiri dzinonyatso kukuya pakutangisa kushaya kwekutarisira kwechokwadi mukushambadzira nekutengesa maitiro pamwe nekumhanyisa kwezvinhu zvitsva zvinodiwa kune tarisiro. Iko kusanganiswa kwenjodzi mbiri idzi kunogona kuremadza kambani yako kana ukasadzikamisa pakuenderera mberi ne vatengi vakatoisa kuvimba kwavo mauri.
Kusundira chimiro mushure mechinhu kudzingirira iyo inotevera tarisiro apo zvinotarisirwa zvichishayikwa pane yako yazvino mutengi base mutambo une njodzi. Ini ndakazviona mumakambani akati wandei uye handisati ndambozviona zvichinyatsoshanda kutora kutanga kune inotevera nhanho.
Iko kusanganiswa kwekugutsikana uye kufambira mberi kwechimiro chekuburitsa icho chichavaka bhizinesi rako zvine hungwaru. Iwe unofanirwa kufambisa bhawa munzira mbiri kuti ubudirire.
Heano mamwe mazano ekuwedzera:
Kana usiri nevashandi vashoma uye uchikura nekukurumidza, kutambisa maawa nemaawa kudzikamisa vatengi vakashatirwa uko tarisiro dzisina kuiswa nenzira kwayo dzinokudzora, kana zvisiri kukumisa.
Kana maficha ako asipo, tengesa kuvimbika, chiono, hutungamiriri nevashandi mukambani yako. Vakuru vanhu vanogona kuita chero chinhu kuti chiitike.
Usavimbise maficha usati wave nawo. Zvakanaka kutaura kumashure kwako, asi kupa misi yakasimba yekuendesa mukutengesa zvivimbiso zvaunobatirirwa.
Kana paine kutsamira kwevatengi, vataure zvinobudirira uye uve nechokwadi chekuti vatengi vako vanonzwisisa mhedzisiro yekusasangana nemabasa avo mukutengesa nekuita maitiro.
Siya nzvimbo yekukanganisa. Kunonoka kuchaitika, zvikanganiso zvichaitika, zviputi zvinomutsa musoro wavo wakashata. Ita shuwa kuti yako timeline inobvumira kune ese ari pamusoro.
Usarega vatengi vako vachitsanangura hurongwa hwako, zvikasadaro uri kutora mutoro kana iwe wanonoka. Zvirinani kuzviita uye kuzviita nemazvo pane kuti zviitwe nekukasira kana kushata zvisati zvaitika.
Ranga vashandi vako vekutengesa uye uite kuti vatore mutoro wezvaunotarisirwa zvisiri izvo. Usatorere dambudziko pasi pemutsara wekugadzira. Hazvina kunaka kuti mumwe munhu azadzise mhiko isina kukwana.
Tame yako yekushambadzira zvinhu. Zvakanaka kuwedzera izwi rako rekushambadzira, asi usavimbisa zvigadzirwa, maficha, kuburitsa, nguva, kana sevhisi iwe yausingakwanise kuzadzikisa chaizvo.
Zivisa mutengi nekukasira kana chirongwa chacho chisipo. Izvo zvakakosha kuti mutengi azive chokwadi chezviri kuitika. Nguva zhinji, vatengi vanoona panguva yekupedzisira kuti havasi kuzozviita. Kufanana netrail yedominoes, izvi zvinogona kuparadza akati wandei zvirongwa zasi kwerwizi izvo yako kambani isingazive.
Tags: Kisimusikushambadzira kwechiitikoKushambadzira Mabhukukushambadza zviitikoQR Makodhikuverengamazanomubairo zvirongwamibayirokutengeswa kwepiritsi
4 Mibvunzo Yekubvunza Yako Webhusaiti Mushanyi
Sep 18, 2008 na5:19 PM